Ukwenziwa kweekhemikhali ezenziwa ekhaya
Iikhemikhali ekhaya lijonganisa: indlela yokwenza ngokuchanekileyo
Nawaphi na amaphupha amabhinqa ahlala ehlala "engumnandi kakhulu kwaye enomtsalane." Inzuzo yeli shishini lezonyango zanamhlanje libonelela ithuba, kwaye iinkqubo ezahlukeneyo zobuhle ziyakwazi ukulwa kwanokuguquka kwesikhumba ezinxulumene neminyaka. Enye yeendlela eziphambili zokulwa neempawu zokuqala zokuguga kukukhangela imichiza. Ngokuphathelele le nqubo kunye nendlela ukukhishwa kweekhemikhali kwenziwa ngayo, uya kufunda kwinqaku lethu.
Ziyintoni ukukhangela imichiza?
Ukuthetha ngokulula, ukukhenkcela yinkqubo yokuhlanjululwa kwesikhumba. Ngokuxhomekeke kwindlela yokuvelela, i-mechanical, chemical and physical. Kwakhona, ukulinganisa kuhlulwe ngokwezinga lokungenelela kwiindawo ezikhunjini eziphezulu, eziphakathi nendawo.
I-Chemical peeling "ukuchithwa" kweeseli zesikhumba ezifile kunye nesisombululo esikhethekileyo okanye imaski. Ngokuqhelekileyo, njengesisombululo seekhemikhali esetyenziselwa izimonyo ezisekelwe kwi-enzyme ne-acids. Ii-enzyme zizinto ezibonakalayo zeprotheyini zendalo kunye nezilwanyana ezivela kuyo, ezonakalisa izibophelelo phakathi kwama-molecule. Zonakalisa iintambo ze-corneum ezibophayo kwaye zivuselele ukuvuselelwa kwesikhumba. I-Acids nayo ibuyele ngokugqithiseleyo iiseli ezinokwenziwa ngobomi. Ngokuqhelekileyo ukusetyenziswa kweekhemikhali, iziqhamo ze-acids ziyasetyenziswa.
Ukongezelela ukulwa nemimbo kunye nemibimbi engaphelelanga, ukupakishwa kweekhemikhali kunceda ukulahla:
amabala kunye neendawo ezidala;
amabala amnyama kunye nama-pores angamabala;
isifo sobuhlungu besesikhumba.
Indlela yokwenza iikhemikhali ekhangela ubuso
Inkqubo yokukhishwa kweekhemikhali yenziwa ngamanqanaba amaninzi. Okokuqala kukho inqanaba lokulungiselela: ulusu lucocwe kakuhle kwaye lugqitywe ngelotion. Emva koko, usebenzisa isiponji okanye ibrashi, isisombululo seekhemikhali sisetyenziswe ebusweni. Ukuba isiseko se-asidi sisetyenzisiwe, imaski isetyenziswe kwiziqendu eziliqela. Emva kwemizuzu eyi-10-15, isisombululo se-alkaline sisetyenziselwa ulusu ukuze kunciphise umphumo we-asidi. Ekupheleni kwenkqubo, isikhumba kufuneka sondliwe nge-cream ekondla.
Iikhemikhali ihluma ekhaya: njani ndiyakwenza nini na nini?
Ukukhishwa kweMichiza akuyona inkqubo elula yokuzicoca. Kudinga ukuchaneka kunye nekhono elithile, kuba izinto ezisetyenzisiweyo zibuhlungu kwaye zingonakalisa ulusu. Kodwa ngokugcinwa kwemithetho yokhuseleko kunye nokunamathela ngokuthe ngqo kumyalelo, ukukhishwa kweekhemikhali kungenziwa ekhaya. Kwakhona kukufanelekile ukukhumbula ukuba i-chemical peeling iyona nto ifanelekileyo eyenziwe ekwindla nangentwasahlobo, xa ilanga lingasebenzi kwaye ukufudumala kwemoya kungaphezulu kwezinga.
Ngokuqhelekileyo ukusetyenziswa kwamasikisi asekhaya ngamakhemikhali asetyenziswayo ngokusekelwe kwiziqhamo zamacidi kunye neemveliso zeekhompiki ezikhoyo. Ngokomzekelo, ungasebenzisa i-glycolic acid, efunyenwe ngobuninzi beediliya ezingavuthiyo. Zibambe nje ezimbalwa zeediliya eziluhlaza kwaye usike kwi-blender. I-gruel esiphumela isetyenziswe ebusweni kwaye ibambe imizuzu eyi-10-15. Emva koko, hlamba imaski ngamanzi ngesepha sentsana kwaye usebenzise ukhilimu onondla.
Kwakhona ukucoca, ungasebenzisa i-citrus nge-lactic acid. Ukwenza oku, thabatha i-1 lemon, i-orange kunye neepuni ze-2 zobisi. Finyisa ijusi kwi-citrus kwaye udibanise nobisi. Musa ukuxhalabisa ukuba ubisi luya kuphelisa - aluyi kulahleka iipropati zayo eziwusizo. I-mask ephumela kuba lukhuni kakhulu, ngoko isetyenziswe kwiziqendu eziliqela. Isixa esiphezulu sohlobo olunjalo ebusweni akufanele sidlule imizuzu engama-15. Ihlanjululwa kunye nesisombululo se-soap ye-alkaline.
Ukusetyenziswa kweoli efunekayo kwi-cosmetology yasekhaya
Indlela yokukhusela ubuso bakho kwiqhwa nomoya
Indlela yokukrazula iindawo ze-pigment kwindlela yobomi bomntu?
Casserole nge squid
Indlela yokurhoxisa amaninzi amaninzi kwisisu
Inkukhu e Provence
Unyango lwezilwanyana zonyango ze-dyspnea
Iphunga elimnandi nelomuncu lomapula
Izinto ezikhethwa ngabantu
Ukupheka kwezitya ezona mnandi
Thatha uzaliso, iingcebiso ezisisiseko
I-liposuction ayisebenzisekanga ngokuqhelekileyo ukukhuluphala okukhulu kunokuba izityalo zendawo zenzeke
Ukupheka kweebhaki ezilula
Iingcebiso eziphosakeleyo: ungatshata njani indoda?
Ama-eggplant ngeeshizi kunye negalikhi
I-squid ezomileyo kwi-sauce
Inkwenkwezi "indlu-2" uNadezhda Ermakova ihlazo ngeentengiso zangaphantsi, ifoto
Ukukhanyisa kwindawo yokuhlambela
I-Brandon i-Brandon izakuvelisa iimpahla zentsana